Ellicott Series 470 Super Dragon® Dredge - Dingana lehibe fanapaka lehibe
Ny dredge 4170 Super Dragon ™ dia misy milina an-tsambo roa hikambana amin'ny paompy sy ny rafi-pitondrana hidradrika. Ity dredge suction cutter lehibe ity dia manana taxi malalaka sy console control de intuitive miaraka amina endrika matevina sy enta-mavesatra amin'ny asa any amoron-dranomasina.
Hizaha habe: 27 ″ x 24 ″ (700 mm x 600 mm)
Main engine: 2,680 HP (2,000 kW)
Engine mazoto: 1,410 HP (1,051 kW)
Fihoarana ambany indrindra fandatsahana: 58 ′ (17.7 m)
• vatofantsika mitsingevana
• Fantsom-pako amin'ny fikojakojana plastika
• Fandrindrana ny fantsom-bidy sy ny famafana
• Ny fikarakarana ny vatan-dambatra dia misolom-bary miaraka amin'ny vatofantsika
• Safidy fanampiny azo alaina rehefa mangataka
4170 DREDGE ADVANTAGES
• Mifanentana tsara amin'ireo mpiantoka mandoto fananganana.
• Azo alaina ho toy ny fanamboarana sambo na unit portable ho an'ny hetsika amin'ny kamiao.
• Fampiasam-bola azo itokisana amin'ny fampiasana maharitra.
• Namboarina ho an'ireo tetik'asa fanarenana matevina lehibe kokoa toy ny renirano, seranan-tsambo, seranan-tsambo ary tetik'asa fanarenana ny tany.